Answering Islam - Oromo: Oromo
Kun gabaasa jecha tokko qofa irratti hundaa’edha. Jechi kunis Masgiida (Maskiida) kan jedhu yemmuu ta’u dhaabbata yeroo hundaa oduu sab-qunnamtii gara garaatin dhageenyu kan bakka bu’uudha.
Kun gabaasa jecha tokko qofa irratti hundaa’edha. Jechi kunis Masgiida (Maskiida) kan jedhu yemmuu ta’u dhaabbata yeroo hundaa oduu sab-qunnamtii gara garaatin dhageenyu kan bakka bu’uudha. Baroota dhihoon booda Masgiidota biyya Ingiliizi fi Awrooppaa keessatti argaman keessatti meeshaalen waraana fi barreeffamoonni
Seensa fi Macaafa Qululluu Waliin Wal-madaalchisuu Kan akka gaafii “Yesus Kiristoos raajii qofa moo Waaqa foonin ml’ate?” jedhuu Macaafa Qulqulluu Qur’aana irraa aadda foo’e hin jiru. Kutaalen Qur’aanaa 88 barreeffama kana keessatti gabaabbinaan ibsaman
Gaarummaan Isin Keessa ni Jiraataa?
Yaalin jireenya gaarii jirachuudhaaf taasifamu hojii dadhabsiisaa dhuma hin qabneedha. Baay’onni keenya hojiilee keenya isaan badaa ta’an too’achuuf ni dhamaana; akkasumas hojii garii ta’e h
Muhaammad Ergamaa Waaqaa isa dhugaatii?
Barreeffamni armaan gadii kun Muhaammad ergamaa Waaqaa isa dhugaadha jedhanii warra amananiif amantiin isaanii sirrii akka hin taane qabxiilee agarsiisan ja’a qabatee jira. Musliimota barreeffama kana dubbisan yaadota kanneen of eeggannannoo fi kadhannaa keessa ta